Abavelisi beMveliso kunye neFektri | Abavelisi beemveliso zase China
Umgangatho ophezulu kwishishini lokubhala ngesikhumba se-PU
Incwadana yomfundi wamaphepha entwasahlobo Khetha iphepha leencwadana zabafundi: Okokuqala, umgangatho wephepha. Ngokubanzi, iphepha elisetyenzisiweyo liphepha le-beige Daolin. Umgangatho wala maphepha mabini ngowona mgangatho uphezulu phakathi kwamaphepha eencwadana ezifanayo. Olu hlobo lwephepha lunokuncipha okuncinci, ukufunxwa kwe-inki efanayo, ukutyibilika kakuhle, ubumbano kunye nokuqaqamba okungafaniyo, ukumelana kwamanzi okunamandla, ukusebenza okunamacala amathathu, kunye nomgangatho olungileyo kunye nexabiso eliphantsi! Incwadi yamanqaku yomfundi owenzelweyo 1. Iphepha yenye yeem ...
I-logo eyenziwe ngokwezifiso, i-notebook ephathekayo enamaphepha angaphakathi
Incwadana yokubhengezwa kwentengiso yokuncitshiswa kwentwasahlobo Ifomathi yencwadana yesiqhelo ayinakubalaselisa inkcubeko yeqela kwaye ayinakulungiswa. Incwadana elula yepropaganda eveliswe yinkampani yethu inokuyilwa ngokuhambelana nenkampani kwaye yenze ukhuthazo lwenkcubeko, ukuze iqela lenkampani linike izipho lilula ngakumbi kwaye lihle, kwaye libalaselisa incasa yeqela. I-Flannel Propaganda Notepad Incwadana yokubhala kwiphepha elingaphakathi: Ngokubanzi okanye amanqaku okupapasha: iphepha lobugcisa / iqabaka ...
Umbala wesikhumba owenziwe ngokwezifiso, umbala owenziwe ngokobucwebe wangaphandle wokupakisha, incwadana yamaphepha enziwe ngemisebenzi emininzi
Le ncwadana yencwadana yesipho esiphakamileyo, iqokobhe elingaphandle linamathiselwe ngesikhumba, kwaye amaphepha angaphakathi enziwe nge-100g iphepha eliphezulu lokubhala elidityanisiweyo. Olu hlobo lwephepha lunokuguquguquka okuncinci, ukufunxwa kwe-inki efanayo, ukuguda okuhle, ubungqingqwa obuqinileyo kunye nokukhanya, kunye nokumelana kwamanzi. , Unesimo esomeleleyo sobukhulu bobukhulu obuthathu, kunye nepeni ephezulu yomthombo wamanzi esekwe ngesinyithi sebhakethi yentsimbi enemodeli ethile kwibhakethi. Idityaniswe ngokugqibeleleyo eyenziwe ngesandla ibhokisi yokupakisha. Pha ...
Umbala webhokisi yamaphepha enziwe ngesikhumba
Le ncwadana yamanqaku ephezulu yeshishini inembonakalo enkulu kunye nembonakalo yesitshixo esisezantsi ngaphandle kokuphulukana nentsingiselo yayo. Iqokobhe langaphandle lifakwe ngombala oqinileyo wombala wesikhumba, iphepha elingaphakathi lenziwe ngephepha lokubhala elidityanisiweyo elingu-80g, kwaye ukuvalwa kwenziwa ngentsimbi yemagnethi yesikhumba kunye nesikhumba. Icortex yangaphandle intekenteke. Iphepha elingaphakathi lolu hlobo lwephepha luthamba oluncinci, ukufunxwa kwe-inki efanayo, ukuguda okuhle, ubungqingqwa kunye nokuqaqamba okungafaniyo, ukuxhathisa kwamanzi okuqinileyo, kunye nokuqina ...